Abantu bangathetha njani 'ukuqonda' kwaye ngexesha elifanayo banceda ukugcina inkqubo? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	3 Julayi 2019	• 4 Comments
Uva abantu abaninzi bethetha ngokuqonda. Abanye bafuna enkulu; abanye bacamngce okanye basebenzise i-yoga; abanye baya ecaweni okanye bahlanganyele kwindlela ethile yonqulo okanye ngokomoya. Imfihlelo enkulu kukuba bangaphi abantu abazama ukucoca iinqanawa zabo ngelixa behamba ngomlambo okhokelela entlango?
Unokuthetha njani malunga nokuqonda xa uncedisa ukugcina inkqubo? Yiyiphi inkqubo? Inkqubo esekelwe ngokupheleleyo ekunciphiseni ingqalelo; inkqubo esifumbanisa ngayo negama 'uluntu'. Unokuqhubeka njani ukuthatha inxaxheba kwinqanaba le-rat; kuthetha ukuqonda kwaye senze zonke iintlobo zezinto zokomoya, ngelixa uluntu luthintela ukuqonda konke? Ngaba akusiyo ixesha lokubeka umkhombe wakho emanzini ukuze ufumane oko kwenzekayo?
Ngale ntshayelelo ungacinga:Akukho nto! NdingumKristu okanye ndiyomoya kwaye ndinceda ukuphucula ihlabathi ngeso simo sengqondo ebomini". Kodwa uyavuka kusasa ukuba usebenze kwinkqubo esekelwe ebukhoboka kunye nokuxhomekeka kwiinkokeli zezopolitiko oye ukhetho, ukuba nethemba elitsha lomphangi lenze ngcono emva kwangaphambili. "UKodwa ufuna ntoni iVrijland? Uhlaselo? Andiyi kuyeka ukuhlawula irhafu mna kwaye andiyi kuyeka umsebenzi wam. Emva koko ndilahlekelwa yinto yonke okanye ndifumana isohlwayo kunye neentlawulo kunye nabancedi kwaye ndinokuxoswa endlwini yam kwaye andisakwazi ukuxhasa lwam intsapho".
Ndathetha nomntu owachitha iminyaka eyi-5 ejele laseTexas ngenxa yempikiswano yeshishini kunye nomshicileli owaziwayo ngokuphathelele ukuphulwa kwelungelo lomenzi. Ngaphandle kokuchaza ngale nkcukacha, amava akhe kule nkqubo yejele ayinomdla ukuchaza ngokufutshane apha.
Le ndoda yathi kwakukho uhlobo lokuhlaselwa kwintolongo (kunye namabanjwa ambalwa amawaka), apho abalindi bebaninzi banyanzelekile ukuba bahambisane nemithetho engabhaliweyo phakathi kwamabanjwa ngokwabo. Ukuba befuna amanzi ashushu, banokunyanzelisa oku ngokufaka umsebenzi ngokubambisana. Kwakhona wabonisa ukuba kwakungekho naluphina ubundlobongela, kuba kwakukho uhlobo lwekhowudi yeqela phakathi kwezizwe ezahlukahlukeneyo kunye nabadala beentlanga (abazenzele entolongweni). Le ndlela yokudibanisa, kuquka iikhowudi zokuziphatha, yaqhubeka naphezu kokuza nokuhamba kwamabanjwa.
Enyanisweni, wachaza uluntu oluthile olusebenza ngokuzimela ngaphandle kwemigaqo yeenkqubo zentolongo; nangona kunjalo ukuba konke kwenzeka ngaphakathi kweendonga zejele. Le fom ye-anarchist yayingekelwe kwimithetho nemithetho, kodwa ngokuhlonipha, izivumelwano kunye namandla okuxazulula iintlanga ezahlukeneyo. Ukuba umntu othile kwiqela alahlekanga, iqela lixazululwe ngokubhekisa umntu. Enyanisweni, waqhathanisa nendlela oku kusebenzelana ngayo nezizwe zakudala zaseNdiya; Izizwe zaseNdiya ezazingabantu bokuqala baseMelika zahlala kunye ngokuthula ngaphandle kwemapolisa, imithetho, izikolo kunye neentolongo (de kube sekufike uColumbus).
Enyanisweni, intolongo enjalo imodeli encinci yoluntu jikelele, apho sibonakala siphila ngakumbi nangakumbi entolongweni ngaphandle kwemivalo ebonakalayo. Ngelishwa, abaninzi abanakuboni oku, kuba bona ngokwabo bayinxalenye "yeqela lezokukhusela". Abanye basebenza kwimfundo, umzekelo, apho izizukulwana ezitsha zabalindi ziqeqeshwa khona. 'Abagadi' Ndiyathetha: isizukulwana esitsha sabaphathi, abaqeqeshi, abaxhasi, abahloli beerhafu, amagosa asebupoliseni, amasoldati, abagcini-zimali, amagqwetha, njalonjalo njalo njalo njalo. Abanye basebenzela urhulumente, kwiinkampani ezizimeleyo ezidibeneyo, zinikezela iinkonzo okanye iimveliso kubarhulumente okanye oorhulumente abemi. Ininzi imisebenzi isebenza ngokukhawuleza kweso sihlandlo okanye i-clockwise in isikhundla esinceda ekulawuleni idilesi entolongweni esiyibiza ngokuthi "uluntu." Kwaye abantu abaninzi abasebenza kwinqaba ephakathi kweso sakhiwo, ngakumbi kunemvakalelo yokuba sisenza kakuhle kakhulu. Emva kwakho konke, kumaqela okusela, amaqela kunye namaqela, ujikelezwe ngabantu abaye basebenzela inkqubo.
Ngelishwa, umzekelo wejele laseTean ke ungabi ngaphantsi, kuba umlinganiselo wabanjwa kunye nabalindi apho wawusasahluke kakhulu. Amawaka amabanjwa amabanjwa angamaqela ambalwa. Kwimphakamo yethu kukho phantse abadali abaninzi, abaphumeleli nabalawuli beemithetho nemithetho kunye nalabo abaye bathanda inkqubo yokuzenzela kunye nezikhundla zabo kuyo (kuba bahlala bephila nabo). Ukuphakanyiswa kwe-anarchist okuphumela ekuziphatheni ngokuzithembekileyo (njengoko kuchazwe yimbobo yebanjwa ndiyathetha nayo) kubonakala ngathi kungabikho okukhethiweyo. Uluntu lwethu lufana nolwenzekile ngexesha lovavanyo lweStanford (Zimbardo) (funda apha).
Nangona kunjalo unako ukuthetha ukuba kukho ithemba ukuba bonke abo bantu bahlala benkolo, inkolo, i-yoga, i-gurus, njalonjalo, bathatha iinqanawa zabo zokomoya ezisuka emlanjeni (eziya ephoseni). Okanye ucinga ukuba akuyi kuba nzolahla? Ingaba ucinga ukuba indlela kuphela yintlalo inokusebenza; Ngaloo ndlela siyibona ibonakala? Ngaba uyaqonda ukuba siyahamba ngokubhekiselele kummandla wamapolisa, apho yonke inkululeko inqatshelwe ngokugqithiseleyo kwaye wonke umntu kufuneka adlale ngaphakathi kwimiba engqongqo yemithetho yelizwe kunye nemithetho?
Ukuba abantu banenkxalabo yokuqonda, ke kukho i-undercurrent endaweni ethile ethanda into ehlukile. Nangona kunjalo, abaninzi bawela ithemba lenkohliso lenkolo kwaye abaqapheli ukuba unqulo olufanayo luchaneke ngokukodwa 'kwinkqubo', ejoliswe ekudaleni ubundlobongela (kuluntu) kuluntu kwaye okwangoku kubambelele ithemba elingamanga lokuba ngumsindisi njengengxube . Le saji iqinisekisa ukuba abantu bayaqhubeka benethemba lokutshintsha, ngaphandle kokusebenza kwabo. 'Qalisa' kungabi yili gama elifanelekileyo kule nto. 'Ukuthengwa ukusuka' mhlawumbi ingcaciso engcono. Kulixesha eliphakamileyo ukuba ungaphinda uphose i-cabin kunye nenqanawa yomkhumbi (ngokomoya, i-yoga ye-bikram, ukucamngca okanye umthandazo), kodwa ukuthabatha umkhumbi uze ususe umkhumbi ukusuka emlanjeni ukusuka kwinkqubo . Mhlawumbi kuvuselela xa ufumanisa ukuba umlambo ukhokelela ekuphoseni kwalasha.
Uninzi lwamaphekula ngokomoya lukunika iifestile kwikhente okanye emkhombeni wakho, kodwa akukhuthazi ukuba uthathe iinqanawa zakho emaphethini uze uhambe.
Kungaba luncedo kuloo mongo ukuba wenze okokuqala inkcazo yolwazi. Inzululwazi kunye neenkampani ezifana ne-Google Alphabet zichitha ixesha elininzi labasebenzi kunye nemali kwimephu yengqondo. I-CEO yeGoogle uRay Kurzweil ukholelwa ngokuqinisekileyo ukuba ingqalelo yiphumo le-neurons ekhreyini lethu kwaye ukuba le sizathu sokuba abantu bazihlukanise nezilwanyana. Oku kubangelwa kukuba abantu banesifo se-neo-cortex kwaye ngoko banokwanela amangqamuzana ebuchopho ukuba baqaphele. Inzululwazi kunye neenkampani ezinkulu zezobuchwepheshe, ukuqonda ngoko kuba ngumphumo wengqondo yengqondo. Ingcaciso yam yokuqonda yinto echasayo: Ukuqonda kukuba okanye kwinto yokuzonwabisa eqhuba i-avatar-bio-avatar.
Ukuze uqonde oko, kufuneka uqale uqonde ukuba siphila kwisimo sokulinganisa umdlali. Oku kungathi ngathi "kuhluthwa ngokupheleleyo kuThixo'(crazy) ezindlebeni, kodwa ukuba ungakhathazeki; Kunokulungelelanisa abantu be-transhumanists kunye nososayensi kwiinkampani ezinkulu ezinje zobuchwepheshe ukukuxelela ukuba siphila kwisimo sokufanisa. Abantu abathanda u-Elon Musk bathanda ukwenza oko (kunye nesizathu). Nangona kunjalo, abachazi ukuba siphila kwi-Luciferian.
Ukuba ufunda lwam uluhlu lwamanqaku malunga nokulinganisa, unokufumanisa ukuba i-physum ye-quantum (ukuba iguqulelwe ngokufanelekileyo kwaye iyaqondwa) inikeza ubungqina obupheleleyo bembono yokuba siphila kwisimo esifanayo. Ndibonelela ngcaciso ebalulekileyo yale nto eli nqaku. Kwakhona kuncedo kuloo mongo ukuya kwimenyu yale webhsayithi kwaye ukhethe into yemenyu 'ukulinganisa'.
"Ukuhlala" kungeyona inkcazelo enhle. Asihlali 'ngokulinganisa: sibaboni kunye nabadlali. Thina, njengokuba kunjalo, abo bahleli elaleni lokulala kunye nomlawuli (okanye 'ukuzonwabisa' kwesizukulwana esidala) kwaye ujonge isikrini esilubona umdlali; umdlali / avatar othabatha umdlalo kwiskrini. Imizimba yethu kuquka neengqondo zi-avatars kule mdlalo-mdlali. Sinayo i-AI (iingubo ezinengqondo) i-avatars ene-bio-ingqondo ecinga kakhulu, inemvakalelo kwaye inokuqwalasela okukhethwa kukho, kodwa umdlali wangaphandle ungaphandle. Noko ke, ii-avatars zethu zivakalelwa njengezinto ezinjengobomi kwaye zibonakala zifana nehlabathi 'elibonakalayo' ngathi.
Ngaba awufumani iingxelo eziyinqaba? Akunjalo ukuba uyayiqonda i-slits ephindwe kabini nge-physicist Niels Bohr, apho kuboniswe ukuba umcimbi ukhona kuphela ekuboneni; nje ngomfanekiso kwiskrini sakho se-Playstation TV kuphela xa uhambisa umlawuli wakho kwaye ujonge loo nxalenye yehlabathi kunye nexesha kumdlalo.
Ingcaciso yokuqonda, ngokusekelwe kulo mbono, yile: iqela elingaphandle elilawula umzimba wakho kunye nengqondo kwaye yenza izigqibo ocinga ukuba ubuchopho bakho buzithatha. Ukwazisa kuza kuba umsebenzi wengqondo kunye kuba zonke izenzo. Ubumnono bungaphandle kwento eyiyo. Ukwazisa ukuba ungubani. Uyazi; awuyiyo ingqondo okanye umzimba wakho. Umzimba wakho kuphela ngu-avatar kulo mzekeliso.
Indlela yodwa yokutshintsha iyakwenzeka ngoko ke kwizinga lokuqonda. Yingakho kubaluleke kakhulu ukufumana ingcamango elungileyo yokuchaza indlela yethu. Ngaba uyaqonda ngokwenene ukuba siphila kwi-simulator-simulation-player simulation, kwaye uya kubona ukuba yonke into eyenziwa kwimiva kunye nokuba unelungelo lokuzikhethela ukubeka umkhombe wakho ngaphandle kwaye utshintsho lunokwenzeka. Kuyavunywa, kuyinkathazo kuba ngokuchanekileyo ngenxa yokuba kubonakala ngathi umakhi womdlalo ubonakala ngokucacileyo (Lucifer) ukuba script ecacileyo kunye nabadlali (ii-avatars) kumdlalo oza kunceda ukugqiba eso script. Ngoko ke kuyimfuneko ukuba abadlali abaninzi bayeke ukudlala umdlalo ngokubhekiselele kweso script.
Kukho isizathu sokuba sidlale lo mzekeliso. Yiyiphi isizathu, ndizama ukuchaza kuyo eli nqaku, apho ndizame ukuchaza ukuba le mlinganiso mhlawumbi iyintsholongwane yefestile kwi-'tumum field 'okanye i-cell stem ehamba phambili yobukho bethu (i-stem cell okanye i-flow flow information evela kuyo yonke into). Nceda ufunde eli nqaku ngokufutshane.
Ndingathanda ukunika isicatshulwa kule nqaku apha:
Thatha amanyathelo okhonkco
Ihamba nxamnye nento yethu yomntu (avatar) yokucinga (ukucinga) ukwenza ukhetho oluya kusenza siphume ngaphandle kwenkqubo. Iyahambelana naluphi na umgangatho wokhuseleko kunye nokukhusela ukubeka i nqanawa. Emva koko, sicinga ukuba xa sihamba kunye nokuhamba, sinokuqhubeka nokuhlawula irenti okanye imali. Sicinga ukuba xa siyeka ukusebenza kwinkqubo asinakusekela intsapho yethu kwaye silahlekelwa yinto yonke. Sicinga ukuba kufuneka sisombulule ngokucinga.
Kuphela xa sibuyisela ukulawulwa kwe-avatar yethu kunye 'nokunyakaza kumdlalo' kulabo abasemagqatshini, siya kubona ukuba banemibono engcono yomdlalo. Ucinga ukuba ngubani ongenza izigqibo ezingcono: idijithali kumdlalo wePlaystation ngokwawo okanye umntu olawula i-avatar?
Yisihlandlo sokuqala ukuphulaphula ukuqonda kunye nokwenza kuphela kweso saziso. Oku kuthetha ukuba kufuneka ukhethe ukuguqula inkambo kwaye uthathe umkhombe wakho emfuleni. Oko kuthetha ukuba kufuneka unqamle ubuchopho bakho bobuchopho kwaye uphulaphule ukuqonda kwakho. Ukucamngca okanye zonke iintlobo zezinye iindlela ezithulisayo kufuneka zenze ukuba uthathe iinqanawa zakho ezikhoyo (ezikhokelela entlango). Ukuba oko akunjalo, ngoko ulahlekelwe yintsifo yento yonke kwaye uxakeke nje ukuphosa ivili lokuhlala kunye nomkhumbi. Iinqanawa zakho ezintle ziphangelwe ngokucamngca okanye i-yoga (njl.) Ziya kuqhubeka zihamba ngomkhumbi.
Ziziphi izilinganiso, yintoni ukuqonda, njani inyaniso yethu eyakhiwe kwaye zininzi kangakanani ubukhulu?
tags: avatar, nqanaba lo kuqonda, cinga, eziziimbalasane, umoya, ukholo, umzimba, kuluntu, kucamngca, Unqulo, ukulinganisa, ngokomoya, inkqubo, utshintsho, yoga, mphefumlo
3 Julayi 2019 kwi-14: 34
Indlela enokwenzeka ngayo, elula ukuphendula i-hypocrisy, ayinayo i-backbone yokuziphatha kwaye ukhethe indlela elula. Izinto ezenza i-madurodam enkulu ngokuhlala encinci kwaye ukuba izinto zibukeka zingalunganga ekuboneni kuqala, kusekho igosa elimhlophe ukudibanisa izinto kunye. Ngenxa yokuba izitiya, i-hedges kunye ne-dikes zigcinwe kakuhle ..
Ukungazi nto eyingozi evela kwiNkosana.
3 Julayi 2019 kwi-18: 34
Abantu bayazi ngokucacileyo ukuba bahlala kwintlalo ephazamisayo apho iphakanyiswa khona ngezizathu zendalo. Ziyichitha ngokubanzi ngokusemgangathweni ngokwenza imimiselo nguRhulumente kwaye ngenxa yokukhuseleka kokuqhubeka nokuthatha inxaxheba emhlambini. Ngokuqinisekileyo unokuyicinga njengoluhanahaniso. Ngamanye amaxesha imeko kunye nokuziphatha njengemfuyo ayanele. Emva koko ukuphazamiseka / ukungqubuzana kuyaphula. Ngethamsanqa, kukho i-gurus, ukucamngca, njl., Ngokwenene, ayitshintshi imeko esifumana ngayo. I-Gurus ayibalulekanga kwinkqubo, iyancomeka kwaye ayicacile, ngoko ke wonke umntu unokunikela ukutolika kwakhe kwesikhalazo se-guru. Ukucamngca ngenye indlela yokukrazula isimo se-quo kwaye ubalekele kuyo inzala yakho. Ngaba konke oku kusebenza kakuhle kumadoda avela kwiskripthi. Abazange babe yinkalo kunye nesifundo sophando olujongene nesimo semvelo. Bonwabile ukuba kukho i-gurus, ukucamngca, njl. Ukuphazamisa umhlambi kubo. Kwaye kulungile kumhlambi ngenxa yokuba intloko yabo ayigxothi. Emva koko, baqhubeka behamba ngokuthula kunye neenkomo. Akunakwenzeka nje ukuba ininzi 'yegurus', abanikezeli ukucamngca, njl. Banamakhwenkwe kwimvelaphi yeskripthi.
31 Julayi 2019 kwi-14: 54
UGeorge Kavassilas uthetha ngayo ngale ndlela: Unokulandelelana kwendalo, i-hologram yoothixo, kunye nehologram yezobugcisa (ithiyori yokulinganisa phakathi kwezinye izinto)
Ke uxela abantu abangena ngokwenyani kwi-thethology theory ukuba banxulumene nale "teknoloji ye-hologram"
Nangona kunjalo, inyani iya kuba kukuba ezi zibhukuqiwe kwaye sinokunxibelelana kumbindi wenene wokwenyani obakho ngaxeshanye.
Ndiza kuyithetha njani le:
Unokuthi uninzi lwamanqanaba okulinganisa. Ngokombono wam, i-luciferian simulation is kuphela kwi-1 ephantsi kwisiganeko.
Umaleko "we-luciferian" odlala kwinqanaba lomhlaba, phakathi kwezinye izinto, kunye "nomaleko weyona luciferian" eyi cosmic udlulela ngaphaya koko.
Ngenxa yokuba yonke into ekule ndawo ye-cosmic ilingiswa kulungelelwaniso lwendalo .. ulwakhiwo / ubungakanani, ngaba sikhona isizathu sokuba kukho inyani engaphakathi kwindlela esebenza ngayo le sekulingisa?
Ngaba ukugqwesa kunokusebenza kunye "nenyani"?
31 Julayi 2019 kwi-19: 32
Ukuba uyayiqonda kakuhle inkcazo yomzimba ngokomzimba kuya kufuneka uqonde ukuba igama elithi "ukulinganisa" alilothemotiki kwaye uyaqonda ukuba umxholo "wokuqikelelwa kweholographic" awuchanekanga (kwaye unokusebenza ngokubonakalayo ikakhulu).
Singongeza zonke iintlobo zamagama ... ukusuka kwii-Wingmaker ukuya eGeorge huppelepup okanye ungafumanisa ubunyani bokwenene.
Ngoku uyenza i-hodgepodge kwakhona ngesiseko esingesihle seLuciferian kunye ne-cosmic enye.
Ukudityaniswa kwazo zonke iintlobo zeengcinga (ukumbumbulu / ihypram) kukwenza kubenzima kwaye ngokomoya. Idala indlela emnandi ngelixa kulula kakhulu ukuyibona kuyo yonke into. Ungafunda yonke into yakho malunga neencwadi ezinobunzima okanye uyiqonde ngokulula konke.
Kumanqaku amaninzi ndicacisile ukuba ungazenza njani ii-simulations. Ngamanye amaxesha kulungile ukufunda yonke into kuqala ngaphambi kokuphendula pf ukungafaki igalelo ekwakheni i-maze.
« Ingqondo yomdatshi waseDutch iswele phantsi: inobuthakathaka kwaye ingenzi
Ngaba u-Ursula von der Leyen (umongameli we-EU kamva) ngokwenene kwigazi elifanayo njengentsapho yasebukhosini yaseBritani? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.833.475